दाँत दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? केही क्षणमै दुखाई चट् पार्ने यी घरेलु उपचारविधि - ज्ञानविज्ञान
दाँतको सहि संभार नहुदा यसमा लाग्ने रोगले दुखाइ निम्त्याउँछ जुन सहन निकै गाह्रो हुन्छ दाँत दुखाइबाट बच्ने केहि उपायहरु
निमको पातमा व्याक्टेरियाबिरुद्ध लड्ने गुणसमेत हुने भएकाले निमपत्ता दुखाई कम गर्ने प्रभावकारी घरेलु उपाय हो । हरियो निमपत्ता नभएमा सुकेको पातलाई पानीमा पकाएर सो मन तातो पानीले कुल्ला गर्न सकिन्छ ।
ताजा निमको पातलाई पखालेर नुन मिसाई पिसेको लेदोलाई दाँत दुखेको ठाउँमा लगाउँदा निको गर्छ। दैनिक तीनपटक मन तातो पानीले कुल्ला गर्नुपर्छ ।
नुन–पानीले मुखमा भएका फोहर खानेकुरा हटाएर सफा गरिदिनुका साथै दुखाई निको गर्छ । एक कप मन तातो पानीमा एक चम्चा नुन मिसाएर मुख कुल्ला गर्दा दाँत दुखेको निको गर्छ ।
ल्वाङको तेल राख्ने
दाँत दुख्दा ल्वाङको तेल राखेर घरमै उपचार गर्न सकिन्छ । यो तेलले दाँत बल्केको वा दुखेको कम गर्छ। तेल नभएको अवस्थामा ल्वाङको फुललाई नरिवलको तेलमा फुराएर त्यसको धुलो दाँत दुखेको ठाँउमा लगाउन सकिन्छ ।
चिसो प्याक प्रयोग गर्ने
दुखेको दाँतमाथि चिसो कटनको टुक्रा राखेर दुखाईबाट क्षणिक रुपमा बँच्न सकिन्छ ।
तुलसी पत्ताको पेस्ट वा रस लगाउने
तुलसीको रसले दाँत दुखाईबाट उत्पन्न हुने ज्वरोसमेत निको गर्छ। तुलसीको रसलाई कटनको कपडामा दलेर दुखेको ठाउँमा लगाउन सकिन्छ ।
दाँत दुखाई रोक्न तुलसी निकै प्रभावकारी मानिन्छ। एक मुठी तुलसीको पात टिपेर राम्रोसँग पखाली त्यसलाई मसिनो गरि पिसेको पेस्ट वा रस दुखेको ठाँउमा लगाउँदा दुखाई निको गर्छ ।
अब हामीले केही नयाँ काम सुरु गछौँ, तब कयौँ समस्या आउने गर्दछन्। कुनै व्यक्तिले ती समस्याबाट हैरानी भएर कामलाई अधुरै छोडिदिन्छन् भने कुनै व्यक्ति ती समस्यासँग जुधेर लगातार काममा लागिरहन्छन् । तर कुनै बेला यस्तो समय आउछ समस्या घटनुको साटो अझ बढ्दै जान्छ ।
यो समस्या हाम्रो समयको साथसाथै हाबी हुँदै जान्छ । र हामी कमजोर बन्दै जान्छौँ । समस्याले हाम्रीलाई तनावमा पार्नुका साथै तर्क शक्तिमा समेत कमजोर बनाउदै लैजान्छ ।
एक अनुसन्धानका अनुसार समस्याले हाम्रो प्रवृति अनुसार आफ्नो रंग देखाउने गर्दछ । यदी हामी सकारात्मक छौ भने त्यो सडकको स्पीड ब्रेकर जस्तै हो । अर्थात केही समयमा हाम्रो गति थोरै कम हुन्छ र फेरि दौडिन थाल्दछ ।
महान साहित्यकार जार्ज बर्नार्डले भने अवरोधले हाम्रो सफलतालाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग गर्दछ । हामीले जति बाधा, अबरोध पार गर्दै जान्छौँ त्यती बलियो हुँदै जान्छौँ ।
धेरै मान्छे केही काम गर्नु अघि डराउने गर्दछन् । यदी हामी जुन काम गर्दा पनि मनमा डर पालेर बस्नेहो भने कहीलै सफता पाउन सक्दैनौँ । असफलताबाट पाठ नसिक्नुम बिचमै छोडिदिन्छौँ भने जीवनमा कहीलै सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ ।
Topics #दाँतको दुखाइ बाट छुटकारा #दाँतको दुखाइकाे घरेलु उपचारविधि #दाँतको दुखाइकाे समस्या
Don't Miss it चिसोमा आफ्नाे स्वास्थ्यलाइ ख्याल गर्नुहाेस् है, नभए हुनसक्छ गम्भीर समस्या
Up Next छाती तथा घाँटी पोल्ने, मुखमा अमिलो पानी आउने जस्ता समस्या हुनेहरुले एकचोटी पढ्नुहोला !
यस्ता केहि घरेलु उपाय जसले गाडीमा उल्टी हुने समस्या ठिक हुन्छ
मानिसलाई गाडी देख्यो कि उल्टी हुने हुन्छ । गाडी भित्र बसे पछि रिगंटा लाग्ने, वाक वाकी हुने र उल्टी नै आउने…
के सकिएला पानीबिना बाँच्न ?
अधिकांश जनावरलाई पनि पानीको अभावका कारण कैयौँ समस्या पर्ने गर्छ तर संसारमा यस्ता पनि केही जनावर छन्, जसले महिनौँ वा…
यसो गर्नुहोस्, ढाड दुख्ने समस्या छ भने
योग गर्नुपर्छ मांसपेशी खुम्चने, रक्तनलीमा रक्तसञ्चार कम हुने र तनावका समस्या कम गर्न योग निकै लाभदायी हुन्छ । ढाडको तल्लो…